I-20W Inkqubo yeGeneral Power Generation China Manufacturer
Inkcazo:Isistim soMbane soMbane,I-System Power Generation System,20W Inkqubo yeMandla eSock Double Deck
Isistim soMbane soMbane,I-System Power Generation System,20W Inkqubo yeMandla eSock Double Deck
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Inkqubo yeGrid Mini > I-20W Inkqubo yeGeneral Power Generation
Le nkqubo yokuvelisa amandla yelanga iqulethwe iimodyuli zeseli zelanga, amandla ombane azinikezele iipakethe zebhetri, isilawuli selanga, inkqubo ye-generator yelanga kunye njalo njalo. Akukho ngco liseko, ukugcina amandla, ukukhuseleka kwendalo, ukulungiswa kokugcina, ukungabikho kwemingcipheko, ukuncipha okulula, ukulungiswa okulula, ukuchithwa okulula, ukuhamba ngokulula, iminyaka engaphezu kwe-20 yobomi benkonzo, iintlobo ezahlukeneyo zokuhlawula umbane, umbane kunye noomasipala inokuhlawuliswa kwinkqubo, utyalo-mali omnye, inzuzo yexesha elide. Ingasetyenziselwa ukuveliswa kwamandla kwii-villas, izindlu, ngaphandle, indawo zokutyelela izhenketho, imimandla yenkonzo yasendle, iindawo ezisemaphandleni ezikude, iziqithi zase-alpine, imizi, ifama, ifama, iintaba, iziqithi, iindlela ezikude kunye nezinye iindawo.
1. nceda uhlawule inkqubo yelanga ngokulandela amanyathelo alandelayo:
1) ukushaja kwamandla elanga:
Vula inkqubo kwaye uyibeke phantsi ngokukhanya kwelanga, kwaye uqinisekise ukuba iipaneli zelanga zifumana ukukhanya okukhulu kangako. Vula "5 Amandla"
Shintsha utshintsho lomphathi, ukuba "I-Indicator Battery Indicator" kunye ne "I-Indicator Yokukhokhisa 11" isalathisi senkokhelo ikhona, ibonisa ukuba umthwalo sele ushaja. Isibonakaliso sebhetri ye-Battery Indicator 8 sikhanya ngokukhawuleza xa ibhetri ityala kwaye siyeka ukushaja ukukhusela ibhetri.
2) Ukutshaja kwamandla e-AC:
Vula "u-5 Power Switch" ukuguqula inkosi kwaye udibanise inkqubo kwinkqubo ye-AC nge-"2 AC Input Interface". Ukuba "I-7 Indicator Battery" isalathisi yebhethri kunye ne "11 Isikhombisi sokuBala" isalathisi senkokhelo siphezu, imveliso isele ishaja. Isibonakaliso sebhetri yeBattery Indicator sibonakalisa i-flash slowly xa ibhetri ihlawuliswa ngokupheleleyo, kwaye ucingo luyakususwa ukuze lukhusele ibhetri.